‘जित्ने बेखबर भए, मैले हारेपनि जनताको सेवा गरे’ « Naya Page
‘जित्ने बेखबर भए, मैले हारेपनि जनताको सेवा गरे’
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा झापा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवार बनेका एलपी साँवा लिम्बू नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारसँग झिनो मत अन्तरले पराजित बनेका थिए । निर्वाचन जितेपछि काँग्रेस सांसद्लाई जनताले त्यति देख्न पाएनन् । उनी राजधानीमै केन्द्रित रहे । तर, निर्वाचन हारेका साँवा भने जनताको घरदैलोमा निरन्तर पुगिरहे । त्यसैको परिणाम स्वरूप झापाको पार्टी नेतृत्वले उनलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार चयन गर्‍यो । अहिल साँवा चुनावी प्रचार अभियानमा छन् । उनीसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीति, बाम तालमेल, उनको उम्मेदवारी, जितका आधारलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नयाँपेज डटकमले गरेको कुराकानीः
झापा जिल्ला र समग्र मेची अञ्चलको इतिहास हेर्ने हो भने बहुदल प्राप्तिपछि मेची अञ्चल नै लालकिल्ला भएको थियो । यो बाम तालमेलसँग अहिले त्यहाँका जनताले यो अपेक्षा गरेका होलान् नि ?
झापा जिल्लाको स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने जनमतको हिसाबले एमाले सबै भन्दा ठुलो पार्टी हो । केही ठाउँमा आफ्नै कारणले पराजित भए पनि एमाले अहिले झापामा एमाले ठुलो शक्तिका रूपमा उदायको छ । बाम तालमेलपछि हामी अन्य दलभन्दा धेरै माथि छौँ । विगतमा लालकिल्ला बनाएको इतिहास फेरि हामीले फर्काउने सम्भावना जीवित छ । अहिले त्यो परिस्थिति विकास भएको छ । अहिले झापाली जनता, हाम्रो नेतृत्व, त्यहाँका कार्यकर्ता एक ढिक्का भएर लालकिल्ला बनाउने गरी लागेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा पाँच वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच जना उम्मेदवार चयन गरेको छ । यसले पनि निर्वाचन जित्न सहज छ भन्ने चर्चा छ नि ?
यो सत्य हो । हामीले धेरै ठाउँमा छलफल गर्‍यौँ । बैठक बस्यौँ । त्यहाँ हामीले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा दुई भन्दा बढी उम्मेदवार छनोट गरेर पठायौँ भने त्यहाँ गुटबन्धी सिर्जना हुन्छ भन्ने ठहर गर्‍यौँ । विगतको अनुभवले पनि त्यही देखायो । गुटबन्धीले एकता कमजोर हुने देखिएपछि झापा जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ, आफूभित्रकै लडाइँले शक्ति कमजोर बनाउनु हुँदैन । त्यो शक्ति जनमत सिर्जना गर्न लगाउनु पर्छ भनेर हामीले सर्वसम्मत उम्मेदवार छनोट गरेको हो । यो कुरा अरू जिल्लाले पनि सिक्नुपर्छ । यसले त्यहाँ एमालेलाई जित हात पार्न सहज छ ।
एलपी साँवासँग के अपेक्ष गरेर त्यहाँको पार्टी सर्वसम्मत उम्मेदवार बनायो ?
गतमा पनि निर्वाचन भए । कोही विजयी र कोही पराजित भए । कुनै दलबाट चुनाव जितेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा नजाने तर कुनै दलबाट चुनाव हारेपछि त्यहीँका जनतासँग सिरानी लगाएर सुतिहाल्ने । ०७० सालको निर्वाचनमा थोरै मतअन्तरले पराजित भएँ । मलाई चुनाव जितेपछि वा हारेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा नफर्किने हो कि भन्ने सबै भन्दा बढी प्रश्न थिए । मैले त्यसैबेला चुनाव जितेपनि हारेपनि म जहिल्यै तपाईँहरूको साथमा रहने छु भनेको थिएँ । मैले जनतासँग गरेको प्रतिज्ञा पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिएँ । विकास निर्माणका काममा ध्यान दिएँ । सडक, शिक्षा, संस्कृति, युवा वेरोजगार, नदी कटान जस्ता जनप्रतिनिधिले गर्ने काममा मैले निरन्तर काम गरे । यसैको परिणाम स्वरुपम मलाई पार्टीले विश्वास गर्‍यो ।
तपाईँका चुनावी एजेण्डा ?
अन्तरघातले समस्या हुने गरेको छ । तपाईँको क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ ?